Nzaghachi Nyocha - Regwọ Ọrụ .gwọ
Home Nzaghachi nyocha
Onyinye wardgwọ Ọrụ na-enyere aka ịmatakwu isi nyocha nyocha na mmekọahụ na mmekọrịta ịhụnanya na nsogbu nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ. Anyị na-eme nke a site na inye onyinye na gọọmentị na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. A na-emelite akwụkwọ a na akụkọ banyere ntinye anyị nyefere na usoro gọọmentị.
Ọ bụrụ n'ịmụta banyere ndụmọdụ ndị ọzọ nke Thegwọ Ọrụ couldgwọ nwere ike inyere aka, biko dowe anyị email.
26 March 2021. wardgwọ Ọrụ Foundationgwọ zara ndị UK Home Office's Ime Ihe Ike Na-emegide Girlsmụ nwanyị na Girlsmụaka Nyocha 2020. Nzaghachi dị site na Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ.
8 December 2020. Darryl Mead zara nzaghachi nke Gọọmenti Scottish akpọ Kwesịrị Nchekwa: Ntụle gbasara ịma aka ụmụ nwoke na-achọ ịgba akwụna, na-arụ ọrụ iji belata nsogbu ndị metụtara ịgba akwụna ma nyere ụmụ nwanyị aka ịpụ. Nzaghachi anyị kwadoro ịnakwere Nordic Model na Scotland, dị ka nke a kwalitere Nordic Model Ugbu a!
22 July 2019. TRF nyere aka na nhazi usoro iji chọpụta ajụjụ ndị a ga-eji mee nyocha NATSAL-4. Nnyocha nyocha nke mmekọahụ na ụdị ndụ na-aga na UK kemgbe 1990. Ọ bụ otu n'ime nyocha kachasị nke ụdị ya n'ụwa.
28 January 2019. Mary Sharpe nyere azịza zuru oke na nyocha Kọmitii Na-ahụ Maka Commons banyere uto nke Teknụzụ Immersive na Addictive. Ajuju a mere n’ime Ngalaba Digital, Culture, Media na Sport. Ọ bụ ndị omeiwu UK ga-ebipụta ya n'ọdịnihu dị nso.
16 July 2018. Na Scotland, Kansụl Ndụmọdụ Mịnịsta nke Mbụ nke Ndị Nwanyi na Girlsmụ Nwaanyị amalitela mmemme a na-emegharị nke na-akpọ nzaghachi ndị mmadụ n'okwu banyere ụmụ nwanyị. Onyinye mbụ anyị nyere bụ njikọ dị n'etiti iyi egwu mmekọahụ na ikiri ihe nkiri.
6 December 2017. TRF zaghachiri na UK Safety Strategy Green Paper Consultation. Anyị nyefere ndị otu nchekwa nchekwa nchekwa Ntanetị na Ngalaba maka Digital, Culture, Media na Sport na mmeghari iwu maka Iwu Digital Economy. Ọnọdụ anyị bụ na gọọmentị UK kwesịrị ịrapagidesi ike na ya iji mee ihe ndị megidere iwu na-akwadoghị na ntanetị. Mpaghara ndị dị mkpa na-ewepu ohere ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ụmụaka na-abụghị foto.
11 June 2017. Mary Sharpe nyefere nzaghachi ndụmọdụ na Usoro Scotland maka igbochi na ikpochapu ime ihe ike megide ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ. Ọ bụ gọọmentị Scottish bipụtara azịza anyị na ya website.
April 2017. Edepụtara Foundationgwọ Ọrụ asgwọ dị ka akụ na-enwe njikọ na ibe obibi anyị Atụmatụ mmemme mba na nchekwa Internet maka ụmụaka na ndị na-eto eto nke Ọchịchị Scottish bipụtara.
8 March 2017. TRF mere ederede ederede na nyocha nke ndị omebe iwu Canada maka mmetụta ahụike nke ikiri ihe ike na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ndị na-eto eto. Ọ dị ebe a English na French. Edere nrubeisi anyị site na Akụkọ na-agbasa nke ndị Conservative nke Kọmitii ahụ kwadebere.
February 2017. Gọọmentị Scottish nyere ntinye okwu 100 maka ọdịnihu nke usoro ọmụmụ nke onwe na nke Mmekọahụ na ụlọ akwụkwọ Scottish. Ntuziaka wardgwọ Ọrụ isgwọ bụ nọmba 3 Ebe a.
11 February 2017. Mary Sharpe na Darryl Mead nyefere ndị na-eto eto 15 ọzụzụ ịntanetị na mmemme 5Rights na Young Scot banyere mmetụta ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ndị na-eto eto nọ na Scotland. Nke a guzobere akụkụ nke usoro ndụmọdụ ahụ nke dugara n'akwụkwọ nke Nkwupụta Ikpeazụ nke 5Rights Youth Commission na gọọmentị Scottish Mee 2017.
20 October 2016. A kpọrọ Mary Sharpe na Darryl Mead ka ha gaa Symposium na 'Nchedo ụmụaka na ntaneti: ịchere n'ihu egwuregwu' na Portcullis House, Westminster. A haziri ihe omume ahụ Workinglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Omeiwu nke UK na Ezinụlọ, ndị nwe na Commons Family & Child Protection Group iji nyere aka na ntinye nke Digital Economy Bill site na ndị omeiwu UK. Akụkọ anyị banyere Symposium dị Ebe a. Na mbido afọ 2016 anyị zara nzaghachi ịntanetị na Bill nke Ngalaba Omenala, Media na Sport na-agba.
9 March 2016. Regwọ Ọrụ respondedgwọ ahụ zara oku maka ihe àmà ederede sitere na Senate Australia na “A na-eme ụmụaka Australia ihe ọjọọ site n'ile ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet”. E bipụtara nke a bụ ụdị nke edegharịgharị ederede dị ka ntinye 284 ma nwee ike ịlele site na ịbanye na Omeiwu nke Australia website.